မြန်မာမလေး တစ် ယောက် မဟုတ် ပေမယ့် မြန်မာ ဆန်ဆန် ဝတ်ပြီး လှနေ တဲ့ နိုင်ငံခြားသူ လေး – Cele Posts
မြန်မာမလေး တစ် ယောက် မဟုတ် ပေမယ့် မြန်မာ ဆန်ဆန် ဝတ်ပြီး လှနေ တဲ့ နိုင်ငံခြားသူ လေး
မြန်မာ မေလး မဟုတ်ပေ မဲ့ မြန်မာ ဆန်ဆန် လေးဝတ်ပြီး လွေန လို့ လူပြော များ နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသူေ လးယေန့ခေတ်မွာ တခြို့ မိန်းကေ လးတွေဟာ ခပ်ဟော့ဟော့ အဝတ်အစား တွေ ကို ပိုမိုဝတ်ဆ င်လာကြပါတယ်…မြန်မာဆန် ဆန် ရင်ဖုံးနဲ့ ထမီ ဆိုတာ မြန်မာ့ ရိုးရာ အဝတ်အထည် ဆိုပေမယ့် ပွဲတက် ပွဲသွားေ လာက်သာ ဝတ်သလို ဖြစ်နေပါပြီ…..ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည် ကို လာလည် ကြတဲ့ နိုင်ငံခြား သူလေးတွေ ကေတာ့ မြန်မာ ဆန်ဆန် ဝတ်ဆင်တာ လေးကို အရမ်းကို သေဘာ ကလြာကြတာ တွေ့ရပါတယ်…
အခုလည်းပဲ မြန်မာ မေလး မဟုတ် ပေမယ့် မြန်မာ့ င်္အကြီလေးနဲ့ ထမီလေး ကို ဝတ်ပြီး အရမ်းကို ချစ်စရာေ ကာင်းနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသူေ လးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်မွာ ခြီးကြူးေ နကြတာပါ…ပန်းရောင် ဝမ်းဆက် မြန်မာဆန်ဆန် ဝတ်စုံလေးကို ဝတ်ဆင်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ ဓာတ် ပုံလေးတွေဟာ လူကြည့် များနေပြီး သေဘာ ကျနေကြတာပါ….
ခုလို မြန်မာဝတ်စုံလေး ကို တန်ဖိုး ထားပြီး ဝတ်ဆင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေး ရဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တွေကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ကြည့်နိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေ လိုက်ပါ တယ်နော်.. မြန်မာမလေး မဟုတ် ပေမယ့် မြန်မာ ဝတ်စုံကို တန်ဖိုး ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေး ကိုလည်း ချီးကျူးစကားဆို ခဲ့ကြပါအုံးနော်…KT
မွနျမာမလေး တဈ ယောကျ မဟုတျ ပမေယျ့ မွနျမာ ဆနျဆနျ ဝတျပွီး လှနေ တဲ့ နိုငျငံခွားသူ လေး
မွနျမာ မလေး မဟုတျပေ မဲ့ မွနျမာ ဆနျဆနျ လေးဝတျပွီး လှနေ လို့ လူပွော မြား နတေဲ့ နိုငျငံခွားသူေ လးယနေ့ခတျေမှာ တခွို့ မိနျးကေ လးတှဟော ခပျဟော့ဟော့ အဝတျအစား တှေ ကို ပိုမိုဝတျဆ ငျလာကွပါတယျ…မွနျမာဆနျ ဆနျ ရငျဖုံးနဲ့ ထမီ ဆိုတာ မွနျမာ့ ရိုးရာ အဝတျအထညျ ဆိုပမေယျ့ ပှဲတကျ ပှဲသှားေ လာကျသာ ဝတျသလို ဖွဈနပေါပွီ…..ဒါပမေဲ့ မွနျမာပွညျ ကို လာလညျ ကွတဲ့ နိုငျငံခွား သူလေးတှေ ကတော့ မွနျမာ ဆနျဆနျ ဝတျဆငျတာ လေးကို အရမျးကို သဘော ကလွာကွတာ တှရေ့ပါတယျ…
အခုလညျးပဲ မွနျမာ မလေး မဟုတျ ပမေယျ့ မွနျမာ့ င်ျအကွီလေးနဲ့ ထမီလေး ကို ဝတျပွီး အရမျးကို ခဈြစရာေ ကာငျးနတေဲ့ နိုငျငံခွားသူေ လးရဲ့ ဓာတျပုံလေးတှဟော လူမှုကှနျရကျမှာ ခွီးကွူးေ နကွတာပါ…ပနျးရောငျ ဝမျးဆကျ မွနျမာဆနျဆနျ ဝတျစုံလေးကို ဝတျဆငျပွီး ရိုကျထားတဲ့ နိုငျငံခွားသူလေးရဲ့ ဓာတျ ပုံလေးတှဟော လူကွညျ့ မြားနပွေီး သဘော ကနြကွေတာပါ….
ခုလို မွနျမာဝတျစုံလေး ကို တနျဖိုး ထားပွီး ဝတျဆငျတဲ့ နိုငျငံခွားသူလေး ရဲ့ ဓာတျပုံလေး တှကေို ပရိသတျကွီးတို့ ကွညျ့နိုငျအောငျ ပွနျလညျမြှဝေ လိုကျပါ တယျနျော.. မွနျမာမလေး မဟုတျ ပမေယျ့ မွနျမာ ဝတျစုံကို တနျဖိုး ထားတဲ့ နိုငျငံခွားသူလေး ကိုလညျး ခြီးကြူးစကားဆို ခဲ့ကွပါအုံးနျော…KT
ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရေးနိုဗယ်ဆု ပူ ပူနွေးနွေး ရရှိလိုက် တဲ့ သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် (ရုပ် သံ)